I-China S.S. Abavelisi beHose yeshawari kunye nababoneleli-i-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Ihose yeshawari > S.S. Ithumbu leshawari
S.S. Ithumbu leshawari Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, umenzi ophezulu ochwephesha kunye nomthengisi ngaphandle e-China kwaye ube kumgca weplastiki ngaphezu kweminyaka engama-20 kunye neshishini lempahla yococeko iminyaka engaphezu kwe-10, Kwakhona. siye saqinisekisa ngenkqubo yokulawula umgangatho ye-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. sivelisa zonke iimveliso zayo eTshayina. Iimveliso zethu imigca yempahla yococeko ibandakanya oku kulandelayo: Intloko yeshawa, Ishawa yesandla, iiseti zikaloliwe zesilayidi, izibambi zeshawa, ithumbu leShower, iHose yeshawari yeSS, iseti yeshawa, isibiyeli sodonga lweshawa, izixhobo zeshawa, iShower Bidet, Ishawa & nezixhobo zokuhlambela ngokunjalo norhwebo kunye ezinye iimveliso zococeko kwi Made in China Website.
S.S. Ithumbu leshawari, ithumbu lentsimbi efihliweyo, ukuphoswa koxinzelelo oluphezulu, ukuchasa umhlwa, ukungagqabhuki kunye nokungavuzi. Umgangatho ophezulu we-PVC / EPDM ityhubhu yangaphakathi, ukumelana nobushushu obuphezulu, akukho lula ukukhubaza kunye nokuqhekeka. Ujongano lwehlabathi jikelele, kulula ukuyifaka ngaphandle kwezixhobo.
Sinegunya elinamandla lokuphuhlisa uluhlu olubanzi lweemveliso ezintsha ngokobukhulu obahlukeneyo kunye neenkcukacha kubathengi bethu abadala ukhetho olwahlukileyo kwiimfuno ezahlukeneyo. Umgangatho ophezulu weemveliso uqinisekiswa bubuchwepheshe obuphambili, izixhobo zanamhlanje, kunye nolawulo lomgangatho kwinqanaba ngalinye lemveliso. Ngombono wethu wolawulo kunye nokukhula okuqhubekayo, iHose ye-S.S. Shower ithengisa kakuhle kwimarike yehlabathi, eye yazuza udumo oluhle kakhulu. Ishishini lethu ligxile kwi-R&D, iOEM, iODM.
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili S.S. Ithumbu leshawari zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu S.S. Ithumbu leshawari uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.